Oxygen mask Manufacturers & Suppliers - China Oxygen mask Factory
Ipayipi lokudonsa elivaliwe
Uhlelo Lokuphatha I-Stool
Ingcindezi ukumnika Bag
Umbala weVenturi Mask-2
I-Oxygen Mask ibhalwa yisifonyo se-aerosol ne-oxygen tubing emboze umlomo namakhala futhi ixhunywe ethangini le-oxygen.I-mask ye-oksijeni isetshenziselwa ukudlulisa umoya ophefumulayo we-oxygen emaphashini eziguli. Isifihla-moya somoya-mpilo sinezintambo ezinwebeka kanye neziqeshana zekhala eziguquguqukayo ezenza ukuthi kube nokulingana okuhle ngobukhulu bobuso. I-Oxygen Mask eneTubing iza ne-tubing yokuphakela i-oxygen engu-200cm, kanti i-vinyl ecacile nethambile inikeza induduzo enkulu yesineke futhi ivumela ukuhlolwa okubukwayo. Oxygen Mask ngeTubing itholakala ngombala oluhlaza noma obala.
I-Oxygen Mask ibhalwa yisifonyo se-aerosol ne-oxygen tubing emboza umlomo nekhala futhi ixhunywe ethangini le-oxygen. Imaski ye-oksijeni isetshenziselwa ukudlulisa igesi yokuphefumula yomoya-mpilo emaphashini eziguli. Isifihla-moya somoya-mpilo sinezintambo ezinwebeka kanye neziqeshana zekhala eziguquguqukayo ezenza ukuthi kube nokulingana okuhle ngobukhulu bobuso. I-Oxygen Mask eneTubing iza ne-tubing yokuphakela i-oxygen engu-200cm, kanti i-vinyl ecacile nethambile inikeza induduzo enkulu yesineke futhi ivumela ukuhlolwa okubukwayo. Oxygen Mask ngeTubing itholakala ngombala oluhlaza noma obala.
I-tracheostomy imbobo encane ngesikhumba entanyeni yakho iye ku-windpipe (trachea). Ishubhu elincane lepulasitiki, elibizwa nge-tracheostomy tube noma i-trach tube, lifakwa ngalesi sikhala ku-trachea ukusiza ukugcina umoya uvulekile. Umuntu uphefumula ngqo ngale tube, esikhundleni sokuphuma emlonyeni nasekhaleni.
Imaski ye-Oxygen Engabuyisi
Isifihla-buso se-oxygen esilahlwayo ngesikhwama sedamu zisetshenziselwa iziguli ezidinga umoya-mpilo omningi, ukusebenzisa kahle umoya-mpilo ekuhlungeni okuphezulu kakhulu. I-Non-Rebreather mask (NRB) isetshenziselwa iziguli ezidinga inani elikhulu lomoya-mpilo. Iziguli ezinokulimala okubuhlungu noma izifo ezihlobene nenhliziyo zifuna I-NRB I-NRB isebenzisa idamu elikhulu eligcwalisa ngenkathi isiguli sikhipha umoya. Umphunga uphoqelelwa ngezimbobo ezincane ohlangothini lwesifihla-buso. Le mibobo iyavaleka ngenkathi isiguli sidonsa umoya, ngaleyo ndlela kuvimbela umoya wangaphandle ukuthi ungene. Isiguli siphefumula umoya-mpilo omsulwa. Izinga lokugeleza kwe-NRB yi-10 kuya ku-15 LPM.